इतिहास रच्दै रोहित, वेस्ट इन्डिजसँगको सिरिजमा पूरा गर्लान् यी रेकर्ड? – Everest Dainik – News from Nepal
इतिहास रच्दै रोहित, वेस्ट इन्डिजसँगको सिरिजमा पूरा गर्लान् यी रेकर्ड?
काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट टिमका ओपनर रोहित शर्माले नयाँ कीर्तिमान बनाउने सम्भावना बढेको छ । उनले वेस्ट इन्डिज विरुद्धको सिरिजमा नयाँ कीर्तिमान हासिल गर्ने सम्भावना बढेको हो । यदि राेहितले वेस्ट इन्डिजसँगको सिरिजमा ४ छक्का प्रहार गरेमा सर्बाधिक छक्का लगाउने पहिलो भारतीय ओपनर बन्ने छन् ।
हालम्म उनले २९४ छक्का प्रहार गरिसकेका छन् । वेस्ट इन्डिजसँगको तीन टि–२०, तीन वान डे र २ टेस्ट खेलकाे सिरिज शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
यस्तै रोहितले वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टि–२० सिरिजमा ३ अर्धशतक बनाए अर्को कीर्तिमान बनाउन सक्ने छन् । हालसम्म वेस्ट इन्डिजसँगको खेलमा उनले १० खेलमा २ अर्धशतक बनाएका छन् । वेस्ट इन्डिजविरुद्ध सर्बाधिक अर्धशतक बनाउने रेकर्ड श्रीलंकाका तिलकरत्ने दिलशानको नाममा छ । उनले ९ खेलमा ४ अर्धशतक बनाएका थिए ।
रोहित टि–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्बाधिक छक्का प्रहार गर्ने सूचीको शीर्ष स्थानमा पुग्न धेरै टाढा छैनन् । उनले वेस्ट इन्डिज विरुद्धको सिरिजमा ४ छक्का प्रहार गरे उनी शीर्ष स्थानमा पुग्ने छन् । हालसम्म टि–२० मा सर्बाधिक छक्काको रेकर्ड क्रिस गेलको नाममा छ । उनले टि–२० मा १०५ छक्का लगाएका छन् । यस्तै न्यूजिल्याण्डका पार्टिन गुप्टिलले १०३, रोहितले ९४ म्याचमा १०१ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
ट्याग्स: कीर्तिमान, भारतीय क्रिकेट टिम, रोहित शर्मा